Qiso Layaab Leh oo ka dhacday Wadanka Finland, iyadoo ay u dhaxeysay Lamaane Soomaaliyadeed. (Sababtu Maxay Tahay). | BOGGA ARIMAHA JACEYLKA KA DHIGO HOYGAAGA KOOWAAD
Qiso Layaab Leh oo ka dhacday Wadanka Finland, iyadoo ay u dhaxeysay Lamaane Soomaaliyadeed. (Sababtu Maxay Tahay).
Dhacdadaan ayaa waxay ka dhacday magaaladda caasimadda ah ee Helsinki ee dalka Finland, waxayna u dhaxeysay lamaane Soomaaliyadeed kadib markii uu soo dhex galay dhibaato aanan caadi aheyn, lamaanahaan ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Khaalid iyo Nimco. sidi ay wax u dhaceyn,
Si kastaba ha’ahaatee waxaan u dhaqaaqay dhankii ay joogtay, waan lahadlay meesha ayaa isku wareysanahay, anigoon u sheegin magacayga ayay igu tiri, duqa magacaaga soo maaha Khaalid? Marbaas baan ku iri haa, anigoo u raaciyey sidee ku ogaatay, waxay igu jawaabtay “haddii aad u moodo inaanan lagu garaneyn, hadaba iska ogow waa lagu yaqaanaa”, waxaa niyadda iska dhahay malaha qofta adiga ayayba ku dooneysaa.
Wada-hadal iyo isbarasho kadib waxaan kala qaadanahay teleefanadii guryaha inoogu yiray. Halkaasi ayuu ka bilowday xiriirkaynii, xilli aan dheerayn kadib, Nimco waxaan ku iri, wax badan ayaa ku daneyn jiray, adigoo aanan i fahmin wax dhibaato ah, sidee baad u aragtaa haddii aan ku sheegto arin aan in badan kaa qarin jiray, balse waxay igu tiri, waxba ha’iga xishoon hana iga cabsin ee afka kala qaad. Waxan u sheegay in’aan ahay wiil jaceyl.
Waxay igu jawaabtay iga raali noqo, maxa yeelay waxaan la-socdaa wiil kale. Intaas kadib waan naxay, teleefankii ayaa ku damiyey waayo aad baan u naxay, xitaa waan garan waayey sida ay wax iga noqdeen. Todobaad maanan tagin iskuulka,
waa ay i soo gaarayn, waanu wada hadalnay, kadib Cabdi Khadar ayay u mahad celisay, sidii ayuu ku tagay, aniga iyo iyada ayaa isku soo harnay, waxay igu tiri “Nacas miyaa tahay, sidee wax kaa yihiin, gabar iyadoo oo ku dooneysa ayay waxay doonto ku dhaheysaa ee waxaa lagaa doonaayay inaad iga sal-gaarto oo maysan aheyn, inaad iska aamusto, hadda adigoo i maqlaaya welibana i arkaaya ayaa waxaa ku lee-yahay Khaalidow waan ku jeclahay.
Habeen iyo Maalin, kaamana maarmo habeenadaan oo dhan maanan seexaneynin, aad baan kaaga wal-walsanaa”. Intaas markaan maqlay aad baan u farxay, sidii ayuu ku bilowday caashaqeynii. Mudo kadib waxa inoo dhamaaday iskuulkii, waxaa anna Suuqa Bakaraha ka furtay Suuq Bacadla ah.
Waxay i dhashay gabar, habeen habeenada kamid ah xilli aan kasoo baxay Salaadii cisha ahayd, ayay i soo wacday iyadoo igu tiri waa inaad imaadaa, Ethiopia, Kenya ama Uganda hadba midka aad dooneysid, waayo waxaan doonaayaa inaan ku dacwooda. Laba todobaad kadib waxaan soo gaaray magaaladda madaxda dalka Kenya ee Nairobi.
Nimco waxay baratay wiil Najiib oo isna joogay dalka Finland, Nimco iyo Najiib xiriir ayaa ka dhaxeeyay balse Aniga maanan ogeyn, waxayna i bilowday Dacwad.
Intii ay joogta Filand, Nimco iyo Najiib waa ay isku dheeraadeyn, waxaa i soo baxday Fiisihii aan ku tagi lahaa dalka Finland, sidii ayaan ku imid Finland, Airport-ka (Madaarka) maysan iga soo doonin oo waxay i soo dirtay wiilal ay qaraabo ahaayeen, halka ay iyadana magaaladda u raacday Najiib. Waxan isdhahay malaha shaqo ayay ku maqan tahay, oo shaqo kuma maqna ee wareeg ayay ku maqan tahay.
Maalintii igu daneyd waxay aheyd, anigoo guriga joogo ayaa waxay keentay Najiib, qolka ayay galeyn, waan ciishooday, wax aan sameeyo ayaa garan waayay, go’aan cad waxaan ku gaaray inaan iskaga tago gurigaas, waxaa jiray wiil uu dhalay adeerkey oo ku noolaa meel gobol ah, meeshaas ayaan tagay, waxaana u sheegay sidii ay wax u dhaceyn.
Wuxuu igu yiri waxaan maqlay qoftaas warkayda, oo intii aadan wadanka imaan ayaa waxay dhahday “Khaalid waan iska furaayaa oo waxaan guursanaayaa Najiib, Aniga Khaalid Jaceyl kuma guursan”. Intaas markii uu igu yiri ayaa sii-carooday
Waxay igu jawaabtay “waxaan u baanahay inaad iskakey fasaxdo oo aan kaa raaxeysto” Waan ciishooday teleefanka ayaa ku damiyey, sidii ayaana ku furnay, haddii aan dilli lahaa Aakhiro iyo Adduun waxba kuma dheefeen, waxaan iska qaatay inaan iska sabro.
Hadaba waxaa fursad-siin doonaa dhalinta Soomaaliyadeed iyo in’ay Khaalid la-qeyb sadaan dhacdadaan murugta leh ee ku dhacday, wixii talo iyo wacyi gelin idinka ah kusoo dira
qalbijaceyl11@hotmail.com�anaga ayaa u gudbindonee haduu alle idmo
waa jaceylkii xamaan iyo raxmo ruun (qebtii 3aad) Maxaa kala heysto waalidka iyo mucaashaqiinta ( qis dhab ah oo